> Resource> iPad> Olee otú iji Hichapụ oyiri Songs on iPad
Achọpụtara m na m nwere oyiri songs na iPad ma ọ bụghị na iTunes na m PC. M ọbụna họrọ bụghị ka mmekọrịta music na synced m iPad na iTunes. O juru m anya m ka nwere 33 songs hapụrụ na m iPad mgbe mmekọrịta. M mgbe ahụ na-ahọrọ mmekọrịta music ọzọ na m ka nwere otu duplicates. Echiche ọ bụla otú m nwere ike ihichapụ songs si iPad? M na-agba ọsọ ndị ọhụrụ OS na iPad.
Ọtụtụ oyiri songs na gị iPad erepịakwa mpịakọta nke ohere. Ọ na-eme ka ọ na-esi ike ịhụ gị chọrọ songs. Ọ bụrụ na ndị oyiri songs nwekwara na kọmputa ma ọ bụ iTunes Library, ị nwere ike akpa-ewepu songs na ya, na mgbe ahụ mmekọrịta iTunes na gị iPad nke ugboro abụọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere otu nsogbu dị ka enyi na-ekwu n'elu, m atụ egwu na iTunes mmekọrịta ga-arụ ọrụ.
N'ikwu eziokwu, Apple-enye gị ohere ihichapụ songs on iPad otu otu. Ma nwere ike ị oyiyi ma ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị 300 oyiri songs na mkpa ihichapụ? Ọ bụ na-akụda mmụọ, ọ bụghị ya? Na nke a, m ike ikwu na ị na-agbalị iPad manager - WWondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ma nsụgharị nke software ike ka ị na ihichapụ oyiri songs on iPad na ogbe.
Cheta na: ma nsụgharị na-ahapụ gị ihichapụ oyiri songs si iPad Obere, iPad na Retina ngosi, The New iPad, iPad na iPad 2 mgbe ha iOS bụ iOS 5, 6 ma ọ bụ 7.
Olee ka ihichapụ oyiri songs on iPad
The nkuzi n'okpuru na-agwa gị otú ị ka ihichapụ iPad oyiri songs na Windows version - Wondershare TunesGo. Mac ọrụ nwere ike na-yiri nzọụkwụ mgbe eji TunesGo (Mac) ihichapu oyiri songs si iPad.
Wụnye na-agba ọsọ TunesGo na kọmputa gị, na jikọọ na gị iPad na kọmputa na eriri USB. Mgbe achọpụtara, ị iPad ga-egosi n'elu ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Wepụ oyiri songs on iPad
Na-ekpe kọlụm, pịa "Media". Site ndabara, Music window ẹwụtde ke nri ebi ndụ. Ọ bụrụ na ị pịrị "Movies", "TV na-egosi", wdg n'elu akara na oge ikpeazụ, ị kwesịrị ị na pịa "Music" iji bugote music window.
Ị na-ahụ, ndị niile songs na gị iPad na-depụtara. Gaa na-ahụ oyiri songs. Akara ha, na pịa "Hichapụ". N'oge song mwepụ usoro, eme ka n'aka gị iPad ejikọrọ oge niile.
Ị mere nke ọma! I jisiri wepụ oyiri songs na gị iPad. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ iji TunesGo mbubata ma ọ bụ mbupụ ọkacha mmasị gị faịlụ, dị ka na fim, photos, pọdkastị. Ihe juru ị bụ na ọ dịghị mgbe ewepu na ugbu a faịlụ gị iPad n'oge faịlụ transfer usoro.
Download TunesGo na-agbalị esi wepụ oyiri songs si iPad.
Na-ekiri ndị Video iji Hichapụ oyiri Songs on iPad